ဘာကြောင့် ဆံပင်တွေ အကျွတ်များတာလဲ ??? - Barnyar Barnyar
April 11, 2022 thanzin laypyay အလှအပရေးရာ 0
ဘာကွောငျ့ ဆံပငျတှေ အကြှတျမြားတာလဲ ???
ဆံပငျကြှတျခွငျးမှာ အကွောငျးရငျး အမြိုးမြိုး ရှိတတျကွပါတယျ။ အမြားစုကို ကွညျ့မယျဆိုရငျ နတေ့ဈနတေ့ာမှာ ဆံပငျအခြောငျးရေ ၅၀ ကနေ ၁၀၀ အထိ ပုံမှနျ ကြှတျတတျ ကွပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ ပုံမှနျ ဆံပငျ ကြှတျခွငျးဆိုတာက ခေါငျးဖွီးလိုကျတဲ့ အခါမှာ ဘီးမှာ ဆံပငျမြား ကပျညိလာခွငျးမြိုး နဲ့ အကြီင်ျမှာ ဆံပငျတို့ ကပျညိနခွေငျးမြိုးကို ဆိုလိုတာ ဖွဈပါတယျ။
ပုံမှနျ မဟုတျတဲ့ ဆံပငျ ကြှတျခွငျး ဆိုတာကတော့ ဆံပငျဖွီးတဲ့ အခါတိုငျး ဆံပငျတှဟော ဘီးမှာ အထှေးလိုကျ ပါလာတာမြိုးနဲ့ ခေါငျးလြှျောတဲ့အခါ ကြှတျပါသှားပွီး ဆံပငျတို့ တဈဖွညျးဖွညျး ပါးလလြာခွငျးမြိုးကို ဆိုလိုတာ ဖွဈပါတယျ။
ရုတျတရကျ သိသိသာသာ ဆံပငျမြား ကြှတျလာပွီ ဆိုရငျ မပေါ့ပါ နဲ့ ဆရာဝနျ နဲ့ တိုငျပငျတာမြိုး ဆံပငျကို ဂရုစိုကျပေးတာမြိုး ပွုလုပျသငျ့ ပါတယျ။
သှိုငျးရှိကျဂလငျး နဲ့ ပတျသကျတဲ့ ပွဿနာမြိုး ဖွဈနပွေီ ဆိုရငျလညျး သငျ့ဆံပငျတှေ ကြှတျတတျ ပါတယျ။ သှိုငျးရှိကျဂလငျး ဆိုတာဟာ သငျ့လညျပငျး ရဲ့အခွမှော ရှိနတေဲ့ လိပျပွာပုံ သဏ်ဍာနျ ဝလငျး တဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။ သှိုငျးရှိကျဂလငျးဟာ လူ့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ လုပျဆောငျမှူ အတျောမြားမြားကို ပုံမှနျ ဖွဈအောငျ ထိနျးညှိ ပေးထားတဲ့ ဟျေါမုနျးတှကေို ထုတျပေးနေ တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
သှိုငျရှိကျ ဟျောမုနျး ထုတျပေးတဲ့ အနညျးအမြား ပျေါမှာ မူတညျပွီး ဆံပငျပေါကျတဲ့ ဖွဈစဉျ လှဲမှား သှားတတျတာပဲ ဖဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ သို့ပမေဲ့ သှိုငျးရှိကျဂလငျးကွောငျ့ ဖွဈတတျတဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျ ကခြွငျး တကျခွငျး အပူအအေး မခံနိုငျခွငျး နှလုံးခုနျ ပွောငျးလဲခွငျးတှလေို ဝဒေနာမြားလောကျ ဆံပငျကြှတျခွငျးဟာ မထငျရှားတာကို တှရေ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ခုခံအား စနဈဟာ ဆံခညျြမြှငျ အိတျတှကေို မှားယှငျး တိုကျခိုကျတာကွောငျ့ ဆံပငျ ကြှတျခွငျး ဖွဈရတာ ဖွဈပါတယျ။ တှရေ့ခဲတဲ့ ရောဂါတဈခုလို့ ဆိုပါတယျ။ သို့ပါသျောလညျး အဲ့ဒီလို ကြှတျသှားတဲ့ ဆံပငျ မြားရဲ့ နရောမှာ ခွောကျလ တဈနှဈခနျ့ ကွာရငျ ဆံပငျတှေ ပွနျပေါကျ လာနိုငျပါတယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။
အခြို့ အမြိုးသမီးတှမှော ကိုယျဝနျဆောငျ နစေဉျအတှငျး ဆံပငျမြား တိုးလာတတျပါတယျ။ ကိုယျဝနျ ဆောငျခြိနျမှာ ဟျောမုနျတှေ မြားလာတာကွောငျ့ ဆံပငျမြားလညျး မကြှတျတော့ပဲ တနျ့နတော ဖွဈပါတယျ။ ဒါကတော့ ပုံမှနျ ဖွဈရိုး ဖွဈစဉျလို့ ဆိုရမှာပါ။
ကလေး မှေးပွီးတဲ့ အခြိနျမှာတော့ ဟျောမုနျးဟာ ပုံမှနျ အခွနေကေို ပွနျရောကျ သှားတာကွောငျ့ ရပျတနျနတေဲ့ ဆံပငျတှဟော အလြှငျအမွနျကို ကြှတျကြ လာတာပဲ ဖဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ တဈခြိနျထဲမှာပဲ ဆံပငျတှဟော မြားစှာ ကြှတျထှကျ သှားကွပွီး ဆံပငျမြား ပါးလလြာတာကို တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။
နောကျ ၂ နှဈခနျ့ ကွာတဲ့ အခါမှာတော့ အံအားသငျ့လောကျအောငျ ပွနျလညျထူထဲ လာတာကို တှကွေုံ့ ခံစားရပွနျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကတော့ ပုံမှနျ ဖွဈရိုးဖွဈစဉျ တဈခုပါပဲ။
ဦးရပွေား ပျေါမှာ ပှေး ပေါကျခဲ့တယျ ဆိုရငျတော့ ဦးရပွေားမြား ယားယံလာပွီး ဆံပငျမြား ကြှတျထှကျ လာကွပါ လိမျ့မယျ။ ဒါဟာ မှူိပိုးကွောငျ့သာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကို မှူိပိုးသတျတဲ့ ဆေးနဲ့ ကုသရမှာ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီ မှူိ ပိုးဟာ တိုကျရိုကျ ထိမိတဲ့ နရောမြားကို အလှယျတကူ ကူးစကျနိုငျပါတယျ။
ဆံပငျ ကြှတျခွငျးနဲ့ ရောဂါတဈခြို့ ဆကျစပျမှူကို သိထားပွီမို့ မိမိ ကိုယျကိုယျ ဂရုစိုကျ ဆငျခငျြ နိုငျကွပါစေ။
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းမှာ အကြောင်းရင်း အမျိုးမျိုး ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အများစုကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် နေ့တစ်နေ့တာမှာ ဆံပင်အချောင်းရေ ၅၀ ကနေ ၁၀၀ အထိ ပုံမှန် ကျွတ်တတ် ကြပါတယ်။
များသောအားဖြင့် ပုံမှန် ဆံပင် ကျွတ်ခြင်းဆိုတာက ခေါင်းဖြီးလိုက်တဲ့ အခါမှာ ဘီးမှာ ဆံပင်များ ကပ်ညိလာခြင်းမျိုး နဲ့ အကျီင်္မှာ ဆံပင်တို့ ကပ်ညိနေခြင်းမျိုးကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ ဆံပင် ကျွတ်ခြင်း ဆိုတာကတော့ ဆံပင်ဖြီးတဲ့ အခါတိုင်း ဆံပင်တွေဟာ ဘီးမှာ အထွေးလိုက် ပါလာတာမျိုးနဲ့ ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါ ကျွတ်ပါသွားပြီး ဆံပင်တို့ တစ်ဖြည်းဖြည်း ပါးလျလာခြင်းမျိုးကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုတ်တရက် သိသိသာသာ ဆံပင်များ ကျွတ်လာပြီ ဆိုရင် မပေါ့ပါ နဲ့ ဆရာဝန် နဲ့ တိုင်ပင်တာမျိုး ဆံပင်ကို ဂရုစိုက်ပေးတာမျိုး ပြုလုပ်သင့် ပါတယ်။
သွိုင်းရွိက်ဂလင်း နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာမျိုး ဖြစ်နေပြီ ဆိုရင်လည်း သင့်ဆံပင်တွေ ကျွတ်တတ် ပါတယ်။ သွိုင်းရွိက်ဂလင်း ဆိုတာဟာ သင့်လည်ပင်း ရဲ့အခြေမှာ ရှိနေတဲ့ လိပ်ပြာပုံ သဏ္ဍာန် ဝလင်း တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သွိုင်းရွိက်ဂလင်းဟာ လူ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှူ အတော်များများကို ပုံမှန် ဖြစ်အောင် ထိန်းညှိ ပေးထားတဲ့ ဟေါ်မုန်းတွေကို ထုတ်ပေးနေ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သွိုင်ရွိက် ဟော်မုန်း ထုတ်ပေးတဲ့ အနည်းအများ ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဆံပင်ပေါက်တဲ့ ဖြစ်စဉ် လွဲမှား သွားတတ်တာပဲ ဖစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ သွိုင်းရွိက်ဂလင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ကျခြင်း တက်ခြင်း အပူအအေး မခံနိုင်ခြင်း နှလုံးခုန် ပြောင်းလဲခြင်းတွေလို ဝေဒနာများလောက် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းဟာ မထင်ရှားတာကို တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအား စနစ်ဟာ ဆံချည်မျှင် အိတ်တွေကို မှားယွင်း တိုက်ခိုက်တာကြောင့် ဆံပင် ကျွတ်ခြင်း ဖြစ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တွေ့ရခဲတဲ့ ရောဂါတစ်ခုလို့ ဆိုပါတယ်။ သို့ပါသော်လည်း အဲ့ဒီလို ကျွတ်သွားတဲ့ ဆံပင် များရဲ့ နေရာမှာ ခြောက်လ တစ်နှစ်ခန့် ကြာရင် ဆံပင်တွေ ပြန်ပေါက် လာနိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
အချို့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် နေစဉ်အတွင်း ဆံပင်များ တိုးလာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန်မှာ ဟော်မုန်တွေ များလာတာကြောင့် ဆံပင်များလည်း မကျွတ်တော့ပဲ တန့်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပုံမှန် ဖြစ်ရိုး ဖြစ်စဉ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
ကလေး မွေးပြီးတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဟော်မုန်းဟာ ပုံမှန် အခြေနေကို ပြန်ရောက် သွားတာကြောင့် ရပ်တန်နေတဲ့ ဆံပင်တွေဟာ အလျှင်အမြန်ကို ကျွတ်ကျ လာတာပဲ ဖစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ဆံပင်တွေဟာ များစွာ ကျွတ်ထွက် သွားကြပြီး ဆံပင်များ ပါးလျလာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် ၂ နှစ်ခန့် ကြာတဲ့ အခါမှာတော့ အံအားသင့်လောက်အောင် ပြန်လည်ထူထဲ လာတာကို တွေ့ကြုံ ခံစားရပြန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပုံမှန် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် တစ်ခုပါပဲ။
ဦးရေပြား ပေါ်မှာ ပွေး ပေါက်ခဲ့တယ် ဆိုရင်တော့ ဦးရေပြားများ ယားယံလာပြီး ဆံပင်များ ကျွတ်ထွက် လာကြပါ လိမ့်မယ်။ ဒါဟာ မှူိပိုးကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို မှူိပိုးသတ်တဲ့ ဆေးနဲ့ ကုသရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ မှူိ ပိုးဟာ တိုက်ရိုက် ထိမိတဲ့ နေရာများကို အလွယ်တကူ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ဆံပင် ကျွတ်ခြင်းနဲ့ ရောဂါတစ်ချို့ ဆက်စပ်မှူကို သိထားပြီမို့ မိမိ ကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက် ဆင်ချင် နိုင်ကြပါစေ။